Maqaal - Xalku Waa Gole Madaxweyne oo Ka Kooban 3-da Xisbi Iyo Muddo Kala Guur Oo 3 Sanno Ah - 12-09-2017
Wednesday September 13, 2017 - 10:46:19 in Maqaallo by XA_Wararka Caynaba News
Mar haddiiba Somaliland lagu asaasay qaab beeleed, isla markaana lagu heshiiyay in looga gudbo Qaranimo, maadaama aynu ka wada war-qabno in beelnimadu
aanay ina gaadhsiinayn horumar, oo halka ugu fiican ee ay ina gaadhsiin kartaa ay tahay nabad mar kastaaba taxadar looga qabo inay isu-badasho colaad (Negative Peace).
1. Dib ula soo noqoshada Madax bannaanida Somaliland = Waa lagu guulaystay.
2. Nabadaynta Somaliland = waa lagu guulaystay.
3. Dhisida Haykalka dawladnimo (Qaramaynta ciidamada/ Wasaaradaha..iwm) = waa lagu guulaystay.
4. In nidaamka beelnimo ee intaasi hore oo dhan suuragaliyay looga guuro nidaam qaranimo oo diimuqraadiyad ku salaysan = Waa lagu guul-darraystay.
1. In la dhiso hayado dawladeed oo adag, oo ka madax bannaan qabyaalada.
2. In sarraynta sharciga la adkeeyo.
3. In gabi ahaan laga saaro saaxada siyaasada urur kasta oo ku salaysan qabiil sida madax-dhaqameedka …iwm.
4. In shacabka la baro muwaadinimada oo ay u dhaqmaan si muwaadiniin ah oo ay xidhiidh toos ah la yeeshaan dawladooda iyagoo aan u baahnayn inay u dhex maraan beelohooda.
5. In nidaamka doorasho noqdo mid sahlaya in muwaadiniintu is abaabulaan qaab fikir iyo aragti ku salaysan, oo ka fog reernimada.
2. Sarraynta Sharcigu iyo kala dambayntu aad ayuu faraha uga sii baxay, waxaana tusaale fiican inoo ah murankii dhawaan ka dhashay shirgudoonka golaha wakiilada, oo waxa ay Somaliland maanta ku socotaa isu-tanaasul iyo isa-sa-sabasho.
3. Axsaabteenu waxay noqdeen qabiil sooc ah iyo hanti gaar ah oo ay dad iska leeyihiin.
4. Shacabka Somaliland lama barin umana bilawna inay yihiin muwaadiniin balse waxay isu arkaan kuwo reero ka soo jeeda, taasna waxa tusaale fiican inoo noqonaysa maceeshada oo cirka isku shareeraysa iyo shacabka oo u midoobi kari la’ maadaama aanay isu arkayn kuwo dani ka dhaxayso, oo qof walba u arko in cida danta ka dhaxaysaa uu yahay ka isku qabiilka yihiin, xita haddii ay kala duruufo yihiin.
5. Nidaamkeena doorasho waa mid xoojinaya qabyaalada iyo reernimada, oo waxa marag ma doon ah in suuqa qabyaaladu ay cirka isku-shareerto mar kasta oo ay doorasho soo dhawaato.